အာဒီဘရန် - ဝီကီပီးဒီးယား
တောရပ် ကြယ်စုတန်းရှိ ကြယ်
ကိုဩဒိနိတ်: 04h 35m 55.2s, +16° 30′ 33″
တောရပ် ကြယ်စုတန်းမှ အာဒီဘရန်၏တည်နေရာ
04° 35′ 55.239″
ဗဟိုခွာအား အလျင် (Rv) 7001542600000000000♠+54.26±0.03 km/s
သင့်လျော် ရွေ့လျားမှု (μ) RA: 7001627800000000000♠62.78±0.89 mas/yr
Dec.: 2997810650000000000♠−189.35±0.58 mas/yr
ပြောင်းလဲ တည်နေရာ (π) 49.97 ± 0.75 mas
အကွာအဝေး ၆၅.၃ ± ၁�0 ly
(၂၀�0 ± ၀.၃ pc)
ပကတိ အရွယ်အစား (MV) 3000359000000000000♠−0.641±0.034
ထုထည် 7000150000000000000♠1.5±0.3 M☉
အချင်းဝက် 7001442000000000000♠44.2±0.9 R☉
တောက်ပမှု 7002518000000000000♠518±32 L☉
မျက်နှာပြင် ဒြပ်ဆွဲအား(log g) 1.59 cgs
သက်ရောက်သည့် အပူချိန် 3,910 K
သတ္တုကြွယ်ဝမှု [Fe/H] –0.34 dex
စတီလာ လှည်ပတ်မှု 643 days
87 Tauri, Alpha Tauri, BD +16°629, GJ 171.1, GJ 9159, HD 29139, HIP 21421, HR 1457, SAO 94027.
အာဒီဘရန် /ælˈdɛbərən/ သည် လိမ္မော်ရောင် ကြယ်ဘီလူးတစ်စင်းဖြစ်ပြီး ဇိုးဒစ် ကြယ်စုတန်း၏ဝေးရာသို့ အလင်းနှစ် ၆၅ အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ တောရပ် ကြယ်စုတန်းတွင် ယင်းသည် အတောက်ပဆုံးကြယ်ဖြစ်ပြီး ညဘက်ကောင်းကင်တွင် ၁၄ စင်းမြောက် အတောက်ပဆုံး ကြယ်ဖြစ်သည်။ အာဒီဘရန် ဆိုသည့်နာမည်သည့် အာရပ်ဘာသာစကား (الدبران al-dabarān) ဖြစ်ပြီး နောက်လိုက်သူ ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဟူမူ ယင်းသည် ညီအစ်မခုနှစ်ဖော်ကြယ်စုတန်းနှင့် နီးကပ်သောကြောင့်ဟု ယူဆရသည်။ပိုင်အိုနီးယား ၁၀ အာကာသယာဉ်သည် ယခုလက်ရှိ ယင်းကြယ်၏ လားရာအတိုင်း ဦးတည်လျက်ရှိပြီး အနီးကပ် ချဉ်းကပ်မှုမှာ နောင်နှစ်ပေါင်း နှစ်သိန်းခန့်အကြာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
၂ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိ
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ ၁.၆ V* alf Tau -- Variable Star။ SIMBAD။ Centre de Données astronomiques de Strasbourg။ 2009-12-16 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃.၀ ၃.၁ Query= alf Tau။ General Catalogue of Variable Stars။ Centre de Données astronomiques de Strasbourg။ 2009-12-16 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄.၀ ၄.၁ Gatewood, George (July 2008), "Astrometric Studies of Aldebaran, Arcturus, Vega, the Hyades, and Other Regions", The Astronomical Journal 136 (1): 452–460, Bibcode:2008AJ....136..452G, doi:10.1088/0004-6256/136/1/452
↑ Ohnaka, K. (May 2013), "Spatially resolved, high-spectral resolution observation of the K giant Aldebaran in the CO first overtone lines with VLTI/AMBER", Astronomy & Astrophysics 553: 8, Bibcode:2013A&A...553A...3O, arXiv:1303.4763, doi:10.1051/0004-6361/201321207, A3
↑ Richichi, A. (2005). "Aldebaran's angular diameter: How well do we know it?". Astronomy & Astrophysics 433 (1): 305–312. doi:10.1051/0004-6361:20041765. Bibcode: 2005A&A...433..305R. “We derive an average value of 19.96±0.03 milliarcsec for the uniform disk diameter. The corresponding limb-darkened value is 20.58±0.03 milliarcsec, or 44.2±0.9 R☉.”
↑ ၇.၀ ၇.၁ ၇.၂ ၇.၃ Piau, L. et al. (February 2011), "Surface convection and red-giant radius measurements", Astronomy and Astrophysics 526: A100, Bibcode:2011A&A...526A.100P, arXiv:1010.3649, doi:10.1051/0004-6361/201014442
↑ Aldebaran။ Stars (May 22, 2009)။ 10 January 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2009-12-20 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Nieto, Michael Martin; Anderson, John D. (January 2007), "Search forasolution of the Pioneer anomaly", Contemporary Physics 48 (1): 41–54, Bibcode:2007ConPh..48...41N, arXiv:0709.3866, doi:10.1080/00107510701462061
Wikimedia Commons ရှိ Aldebaran နှင့်ပတ်သက်သော မီဒီယာများ
Aldebaran 2။ SolStation။ 25 November 2005 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 November 2005 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Aldebaran at Constellation Guide
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အာဒီဘရန်&oldid=540008" မှ ရယူရန်
၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၃:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။